नमस्कारको संस्कार- विविधा - कान्तिपुर समाचार
असार ३१, २०७५ प्रभा कैनी
काठमाडौँ — आफन्त, साथीसंगी, परिचित व्यक्तिसँग भेट हुनासाथ हामी ‘नमस्कार’ अथवा ‘नमस्ते’, ‘प्रणाम’, ‘दर्शन’ जस्ता अभिवादन गर्छौं । अंग्रेजी बोल्नेहरू ‘हेलो’ ‘गुड मर्निङ’ ‘गुड आफ्टरनुन’ आदि भनेर कुरा सुरु गर्छन् । हवाईमा जाँदा मैले सिकें त्यहाँका नागरिक एकअर्कोसँग भेट हुनासाथ ‘अलोहा’ भनेर आत्मीयता जाहेर गर्दारहेछन् ।
अजरी भाषामा ‘साग्ओल’ शब्दले हाम्रो ‘नमस्ते’ जस्तो भाव दिन्छ भन्ने उषा हमालको किताबबाट थाहा पाएकी थिएँ । संसारको कुनै यस्तो समाज छैन होला, जहाँ आफन्त र परिचित भेट हुँदा कुनै न कुनै किसिमको अभिवादन नगरी कामकुरो थालनी होस् ।
अभिवादन भाषा, स्थान तथा आआफ्नो सामाजिक मान्यताअनुसार फरकफरक तरिकाले व्यक्त हुन्छन् । जस्तो कि, हामी आफूभन्दा आदरणीयजनसँग भेट हुँदा शिर झुकाएर ‘दर्शन’ भन्छौं भने ठूलाले ‘भाग्यमानी भएस्’, ‘दीर्घायु भएस्’ भनेर हामीलाई आशिष् दिन्छन्, हाम्रो आदरको कदर गर्छन् । कसैसँग भेट हुनासाथ अभिवादन गरिएन भने कस्तो कस्तो असहज परिस्थिति सिर्जना भएजस्तो लाग्छ । अर्थात् कसैले मर्यादाअनुसार कसैलाई अभिवादन गरेन भने हामी कस्तो अशिष्ट, बेसोमती मान्छे होला भन्ने टिप्पणी गर्न पनि भ्याउँछौं । कसैले आफूलाई अभिवादन नगर्दा आफू उपेक्षित भएको पनि महसुस गर्न पुग्छन् ।
वास्तवमा अभिवादनका एकदुई शब्दले मानिसको मिजास, स्वभाव तथा अनुशासनको पनि संकेत दिन्छ । अभिवादनसँगै मुस्कुराउँदा भेट हुने दुवै थरीमा एक प्रकारले सकारात्मक भाव प्रसारित भएर कुरा थालनी गर्न मन खुल्छ । भन्न खोजिएको के भने अभिवादनका साना शब्द र संकेतले निकै ठूलो अर्थ दिन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि केही विशेष समयमा यसको अवमूल्यन भएको देखिन्छ ।
केही अनुभवबाट थालनी गरौं । केही वर्ष पहिले हाम्रा ससुराको देहान्त हुँदा आशौच बारिएका सबै दिन मैले हरेक आगन्तुकलाई ‘नमस्कार’ भनेर स्वागत गर्ने चेस्टा गरेँ । मलाई लाग्यो, यी आगन्तुक सबै हाम्रा शुभेच्छुक हुन्, हामीलाई दु:खमा साथ दिन आएका । तर मेरो अभिवादन भिन्नभिन्न तरिकाले उत्तरित भयो । कसैले नमस्कार फर्काए, कसैले फर्काएनन् त कसैले यस्तो बेला नमस्कार गर्न हुँदैन भनेर अब नगर्न‘ भनी सुझाए । मेरो अन्त:स्करणले केही बेठिक कुरा गरेझैं मानेन । त्यसैले मैले नमस्कार गर्न छाडिनँ ।
वास्तवमा धेरै पहिलेदेखि मेरो मनमा यो एकदमै जिज्ञासाको विषय रहँदै आएको छ कि कसैको देहान्तमा आफूलाई समवेदना प्रकट गर्न आउने आत्मीयजनलाई स्वागत गर्न‘ के कारणले अन्यथा सोचिन्छ ? अथवा सान्त्वाना दिन आउने आगन्तुकले पनि एक सुखद भाव व्यक्त गर्न‘ के कारणले अवाञ्छित ठहरिन्छ ?
केही समयपछि मेरा दाजु र आमाको निधनमा पनि मैले आगन्तुकलाई अभिवादन जारी राखेँ । अनुभव उस्तै रह्यो– कसैले नमस्कार फर्काए, कसैले फर्काएनन्, कसैले प्रतिक्रिया दिए, ‘नमस्कर गर्न हुँदैन ।’ भरखरै भाइ डा. उपेन्द्र देवकोटाको असामयिक निधन भयो । जब उनको शव अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि न्युरो अस्पतालको प्रांगणमा राखियो । हरेक आगन्तुकले उनको पार्थिव शरीरमा फूलमाला चढाउँदै नमस्कार गरे । कसैले त गोडामै ढोगे पनि । उनकी जीवनसंगिनी डा. मधु र तीनै जना छोरीले बडो धैर्यका साथ श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न आउने हरेकलाई दुई हात जोड्दै नमस्कर गरेर कृतज्ञता जाहेर गरे । आफ्नो प्रियजनको अन्तिम दर्शन गर्न आउने सबै आफ्ना शुभेच्छुक हुन् र तिनको सद्भाव र आदरको प्रत्युत्तरस्वरूप कृतज्ञता व्यक्त गर्न‘ हरेक व्यक्तिको कर्तव्य हुन आउँछ जुन कुरा एक नमस्कार शब्द अथवा दुई हात जोडाइको भावमा अभिव्यक्त भएको देखेर मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो ।
डा. मधु र उनका छोरीले पुरातन मान्यताविपरीत आफैं लास बोकेर लगेको, दागबत्ती दिएको, काजकिरियाका हरेक प्रक्रिया आफैं सम्पन्न गरेको कुरा पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा धेरै आए । उनीहरू प्रशंसाका पात्र बने । यसलाई अत्यन्त सकारात्मक पाटो मान्नुपर्छ । जब म भोलिपल्टदेखि उनको घरमा पुगें, डा. मधु र उनका छोरीहरू डसनामा सुतेका छन्, अरूले पकाएको खाएका छन्, पहिले नै सिएको लुगा लगाएका, यताउति डुल्दै अरूसँग छोएरै बातचित गरेका छन् । यो पक्ष देखेर धेरै खुसी लाग्यो । तर्कहीन अनावश्यक चालचलन छाडेकामा उनीहरू धन्यवादका पात्र बने । तर मैले विचार गर्दै आएको एक पक्ष फेरि पनि फेल खायो (मैले नदेखेका बेला केही अर्को कुरा भएको भए मलाई थाहा भएन) । कसैले कसैलाई नमस्कार गर्ने कुरा प्राय: बन्द भएको थियो । मैले सोचेँ, हाम्रो पुरातन चलनचल्तीअनुसार चल्न भनियो, अर्थात् यस समयमा अभिवादन गर्न हँ‘दैन भनेर निषेध गरियो होला ।
मलाई खुलदुली लागिरह्यो, हिजो यतिका परिवर्तन गर्ने हिम्मत गर्नेले आगन्तुकलाई नमस्कार किन गर्दैनन् ? हिजो र आजमा यस्तो फरक किन ? हिजो जोडिएका हात आज किन जोडिँदैनन् ? हिजो आगन्तुकका सामु झुकेको शिर आज निहुरिन किन इन्कार्दै छन् ? के हिजोका आगन्तुक र आजका आगन्तुकमा फरक छ ? छैन फरक, हिजो आएका पनि माया, स्नेह र आदरले ओतप्रोत भएर आएका आफन्त हुन् । आजका पनि प्राय: उस्तै हुन् । मैले भने हाम्रो मान्यताअनुसार जसलाई आफूले पहिला अभिवादन गर्न‘पर्ने मानिन्छ उनीहरूलाई नमस्कार गर्ने क्रम जारी राखेँ । फेरि पहिलेझैं कसैकसैले फर्काए, कसैले मलाई उल्लुजस्तै मानेर चुपचाप हेरिरहे भने कसैकसैले ‘गर्न हुन्न नमस्कार’ भन्ने शृंखला चलिरह्यो ।
छैटौं दिन होला सायद, मैले एक आगन्तुकलाई नमस्कार गरें । मेरा नजिक बस्नुभएका दाजु वाचस्पति देवकोटालाई न ती आगन्तुकले नमस्कार गरे न दाजुले नै कुनै किसिमको अभिवादन गर्न‘भयो । मौन वातावरण । मलाई अनौठो लाग्यो । म अरूबेला जस्तो चुप लागेर बस्न सकिनँ । संस्कृतका विद्वान्, हिन्दु धर्मशास्त्रका ज्ञाता, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दाजु वाचस्पति देवकोटासँग सोधेँ, ‘आशौच बारेका बेला किन नमस्कार गरिँदैन ? के धर्मशास्त्रले वर्जित गरेको उल्लेख छ कतै ?’ उहाँले ‘छैन, त्यसै यो चलन चलेको हो’ भन्नुभयो, धेरै छलफल गर्ने परिस्थिति भएन । उहाँलाई आगन्तुकहरूले घेरे, छलफल गरिछाड्ने अठोट अपुरै रह्यो ।
यसै सन्दर्भमा डा. अरुणा उप्रेतीको ‘सामाजिक क्रान्ति’ तथा रामेश्वरी पन्तको ‘मृत्यऽ संस्कारमा परिस्कार’ कान्तिपुरमा पढ्दा समाजमा हँ‘दै गरेका परिवर्तनप्रति धेरैजना सकारात्मक देखिँदै छन् भन्ने बुझिन्छ । सीता गौलीको प्रतिक्रिया देखेर पनि खुसी लाग्यो । कसैका लेखमा पनि मलाई खड्केको अभिवादनबारे केही नदेखेको हुँदा अभिवादनजस्तो सामान्य देखिने तर भाव ठूलो प्रदान गर्ने कार्यको अर्थ खोज्ने जमर्को गरिएको छ यहाँ । रामेश्वरी पन्त त हरेक संस्कारबारे धर्मशास्त्रले कहाँ के भनेको छ भनेर खोज्नुहुँदोरहेछ । यो बानी राम्रो हुँदाहुँदै पनि यस अर्थमा खोज्न आवश्यक ठानिनँ कि हाम्रा धर्मशास्त्रले कुनै पनि अभिवादन गर्न वर्जित गरेकै भए पनि समाजले जसरी अनेक विकृत संस्कारमा परिवर्तन आवश्यक देखेको छ, त्यसैगरी अभिवादन प्रणालीमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ ।
हाम्रा धेरै संस्कार अत्यन्त परपीडक देखिन्छन् । दु:खको समयमा दु:खीलाई अरू पीडा दिनेखालका । मृत्यु संस्कारका अनेक विधि यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सबैभन्दा परपीडक विधान त गरुण पुराणलाई नै लिन सकिन्छ । यसमा मानिसको देहावसानपछि उसको आत्मा शान्तिका लागि भनेर रचिएका र सुनाइँदै आइएका एकएक वाक्यले भयंकर मानसिक त्रास फैलाउँछ । जोकोही सामान्य मानिस यसको त्रासदी दृश्यबाट उम्कन सक्दैन । मनग्गे दान नगरे, मृतक व्यक्तिको दु:खको मात्रै वर्णन होइन कि बाँच्नेलाई पनि अतृप्त आत्माले दु:ख दिइरहने कपोलकल्पित खिस्साको पहाडै हो यो पुराण । विडम्बनै मान्नुपर्छ, दु:खका बेला प्रतिकार गर्न अक्षमहरूबाट सकेसम्म असुल्ने यो जस्तो अमानवीय र परपीडक कार्य पनि हाम्रो संस्कारको हिस्सा बनेर रजगज गरिरहेछ आजसम्म ।
अभिवादन गर्न निषेधित व्यवहार पनि दु:खका बेला दु:ख मात्रै पछ्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताले अभिप्रेरित देखिन्छ । मानौं कि दु:खको सागरबाट उम्कने कुरा गर्न‘ नै अपराध गरेजस्तो । प्रकृतिको अकाट्य यथार्थलाई स्वीकार्दै भविष्यप्रति आशा जगाउन प्रेरित गर्ने, शोकलाई शक्तिमा बदल्न सुझाउने, दु:खलाई सकेसम्म चाँडै भुल्न प्रेरित गर्ने आत्मीयजनले अभिवादनजस्तो आत्मीय भावना जगाउने र सकारात्मकताको सांकेतिक व्यवहारलाई नकार्ने कार्य कत्ति पनि स्वाभाविक लाग्दैन । समवेदना दिन आउने अथवा समवेदना पाउने जोकोहीले सुरु गर्दा पनि हुन्छ । अभिवादन सुखका बेला, उत्सव र हाँस्दा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता नै गलत छ । दु:खका बेला र हाँस्नका लागि पनि यसले उत्तिकै प्रेरक भूमिका निर्वाह गर्न मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ ।
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि कैनी त्रिविस्थित नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र ‘सिनास’ बाट अवकाश प्राप्त अध्येता हुन्।
प्रकाशित : असार ३१, २०७५ ०८:१४